Ikhaya/ArchiCAD/I-template ye-Excel ukuguqula ukusuka kwi-Geographic Coordinates ukuya ku-UTM
IMpuma/iNtshona mayibe ngu-“E” okanye “W”, oonobumba abakhulu
Umntla/uMzantsi kufuneka ube ngu-“N” okanye u-“S”, obhalwe ngoonobumba abakhulu
i-comma njenge-separator yamawaka, ngoko ke: -56.514,707 -12.734,156
Ukuba ufuna ukuzama ngaphambi kokuthenga, thumela umzekelo wedatha ngokugqwesileyo, kumhleli we-imeyile (@) geofumadas. com
Esi sicwangciso sithumela i-Geographical Coordinate (Grau Decimal) kwi-UTM em metres
Enkosi kakhulu, sele ndinetemplate, umbuzo omnye nje, nangona sele ndiyifundile iposti malunga nendlela esebenza ngayo itemplate kunye nokubhekisele kulungelelwaniso lwe-UTM, ukuba ndikwiPeninsula yaseYucatan kwaye ndinendawo elandelayo N 20 - 26-31.5 W 90 - 01 - 42.5, njengoko ndisenza ukuba izikhombisi zithi amabombo akanakufikelela kuma-90 degrees, ndingaluvuyela uncedo lwakho
Ihlawulwe i-13 kaJulio ye-2.017. 08: 59: 22 GMT + 02: 00.
Okwesibini: Ndikhuphe i-excel kwi-geographical ukuya ku-UTM, kodwa ndifuna ukwazi ukuba yiyiphi i-spheroid esebenzayo eBrazil, okanye ingcaciso yokusetyenziswa kuyo indawo ezahlukeneyo.
Hlola i-imeyile, ngamanye amaxesha iya kwi-spam. Kodwa xa intlawulo iyenziwa ufumana irisidi ye-PayPal kunye ne-imeyili ene-ulr yokulanda.
Ngaba isangqa of ububanzi ngoko 1.00 ukhethe despés isangqa uze ufake UTM yakho ilungelelanise bangene isitshixo ngoko incwadi emva kokuba ileta E zy uze ngokuzenzekelayo angene kuwe kuveza ngokuzenzekelayo UTM ukulungelelanisa kwingingqi yakho, kufuneka uvavanyo kunye ndixelele.
Kwiqhosha elibhlowu elithi "Khuphela"
I-post yakho inhle kakhulu apho ndiyakwazi ukukhuphela ifomathi kwi-exc
Imirhumo emihle kakhulu yokubeka yonke ipakethe yolwazi nolwazi
Andazi malunga nokuphumla, kodwa into ehla kum liphepha elinedatha apho ifomyula kuphela yokongeza inani elimiselweyo kwidatha yolungelelwaniso "ebabalwe" ngaphambili. Akanantloko nomsila, ngokokubona kwam. Ukuba unokujonga.
Umbuliso onobubele kwaye ndingabulela kuphela ngamagalelo ahlukeneyo eniwenzayo ngale ndlela; Ngokukodwa, "ubunzima" ukuguqulwa kolungelelwaniso lube luncedo kakhulu kum. Umbuzo omnye: kufuneka kube njani ukucaphula igalelo lakho loguqulo kuxwebhu lwakho?
Ukugqithisa amaDriki ukuya kwiiDigrees imizuzu kunye nemizuzwana:
Hee ... Ndenza uphando nge-GPS kodwa ngenxa ye "memory techniques" (ndilibele intambo ye-antenna) andizange ndigqibe uphando lwam kwaye ndiyenze nge-browser ... kwaye andizange ndiyazi guqula ulungelelwaniso... bandikhuphe kwingxakeko elungileyo… kuhle!!!!